Pet Scissors Vagadziri & Vanopa | China Pet Scissors Fekitori
Kuchengeta Pet Pet Scissor
Ichi chipfuwo chinotsvaira chigero chigero chakagadzirwa chemhando yepamusoro yesimbi isina chinhu, iine huremu hwekutetepa hwe70-80%, uye hauzodhonza kana kubata bvudzi kana uchicheka.
Iyo yepamusoro inogadzirwa neyekuchenesa-kuifukidza titanium alloy tekinoroji, inojeka, yakanaka, yakapinza uye yakasimba.
Ichi chipfuwo chekushongedza chigero chigero chichava mubatsiri akanakisa wekucheka huta hwakakora uye tangha dzakaomarara, zvichiita kuti kucheka kuve kwakanaka.
Kuchenesa mhuka kutapudza chigero kwakanakira zvipatara zvezvipfuyo, zvipfuyo zvekuchengetedza, pamwe nembwa, katsi nedzimwe mhuri. Iwe unogona kuve nyanzvi yekuchenesa uye yekushambidza peturu chishandiso kumba kuchengetedza nguva nemari
Pet Bvudzi Kucheka chigero
Mazino makumi maviri nematatu pane yakasanganiswa muzinga blade inoita ichi chakanakisa chose-chinangwa t pet bvudzi rekucheka chigero.
Chigero chevhudzi kucheka chigero chinonyanya kuita kutetepa.it inogona zvakare kushandiswa kwekucheka kupusa, kwakakodzera kune ese mafuru marudzi. Chiedza chakareruka uye chakatsetseka chinoita kuti kucheka imbwa dzakashoma kuve kwakachengeteka uye nyore, uye chero munhu anogona kuishandisa kucheka bvudzi.
Neichi chinopinza uye chinoshanda chebvudzi rekucheka bvudzi chigero, iwe uchaona kushambidza chipfuwo chako hakuna kuoma zvachose.
Nyanzvi Imbwa Yekushongedza Scissor
Pet Yekushongedza Scissor Set
Chigero chekugezesa chigero chinosanganisira chigero chakatwasuka, chigero chezino, chigero chakakombama, uye muzinga wakananga. Iyo inouya nebhegi resisi, zvese zvaunoda zviri pano.
Iyo yekushongedza yekugezesa chigero chakagadzirwa nesimbi isina tsvina simbi. Chigero chakapinza, chakasimba uye muzinga wakasimba kuti ushandiswe kwenguva refu.
Irabha pachigero kwete chete inogona kudzikamisa ruzha kuti uve nechokwadi chekuti chipfuyo hachizotya, asi zvakare dzivisa kukuvadza ruoko
Iyo yekushambidza mhuka yekugezera chigero inochengetwa muhomwe, zvinoita kuti zvive nyore kutakura uye kuchengeta. Iyi seti inokodzera zvese zvako zvipfuyo zvekushambidzira zvinodiwa uye zvinodiwa.
imbwa yakakomberedza chigero
Iyo yakakomberedzwa imbwa yekugezesa chigero yakanakira kudimburira kutenderedza musoro, nzeve, maziso, makumbo anoputika, uye paws.
Iyo yakapinza reza rinopa vashandisi mushe uye wakadzikama wekucheka ruzivo, kana iwe ukashandisa ichi chakaporeswa imbwa yekushongedza chigero hauzodhonza kana kukweva peturu bvudzi.
Injiniya dhizaini dhizaini inokutendera iwe kuti ubate ivo zvakanyatso nyatso uye udzikise kumanikidza kubva papfudzi rako. Iyi yakakomberedzwa imbwa yekushongedza chigero inouya nemunwe uye chigunwe inoisa kuti ikwane maoko ako kuti unyatsobata bata uchicheka.